I-SABC iphika eyokuthi ixoshe uPeter Ndoro | News24
I-SABC iphika eyokuthi ixoshe uPeter Ndoro
Johannesburg - Kubukeka sengathi uNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu uLindiwe Sisulu wenze iphutha ngesikhathi ekhuluma ePhalamende waveza ukuthi i-SABC ixoshe intatheli esimnkantshubomvu, uPeter Ndoro.
Lokhu kulandela ukuthi uNdoro enza iphutha wamemezela ukuthi uMengameli uCyril Ramaphosa usedlulile emhlabeni.
Okhulumela i-SABC uKaizer Kganyago ukuphikile ukuphawula kukaSisulu wathi ushaqekile ukuthi ungqongqoshe enze isimemezelo esifana nalesi ePhalamende.
"Asikaze sikhiphe isitatimende esisho into enjalo. Ukuphumula kuchaza lokho nje kuphela."
Ngesikhathi kuqhubeka inkulumompikiswano ngenkulumo ebhekiswe esizweni ngoMsombuluko ekuseni, uSisulu uthe uthole isicelo ayalelwe ukuba asidlulisele kuRamaphosa esithi izintatheli ebezicoshela uguquko obelwenzeka kwi-African National Congress "sihlaselwe wukukhathala ngokweqile".
OLUNYE UDABA: BUKA: Kumangale abaningi umfundi wezindaba ethi uRamaphosa useshonile
"Kuyadabukisa ukuzwa ukuthi uNdoro uselahlekelwe wumsebenzi wakhe."
USisulu ube esenxusa uRamaphosa ukuba asukume aqinisekise izwe ukuthi usaphila nokuthi futhi usemxolele uRamaphosa ngaleli phutha alenzile.
URamaphosa, obebonakala ukuthi wethukile kulandela lesi simemezelo, wenze njengoba eceliwe wavayiza isandla wabe eseyaphela yinsini.
Inkulumo kaSisulu ishiye amalungu ePhalamende ebambe ongazansi, umlilo waze wabhulwa nguSomlomo uBaleka Mbete.